Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga jawaabtay qoraaladii Beesha Caalamka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga jawaabtay qoraaladii Beesha Caalamka
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowlada Soomaaliya ayaa si adag loogu jawaabay Qoraaladii ka soo yeeray Beesha Calaamka ee looga hadlay Go’aankii muddo kordhinta ahaa ee Golaha Shacabka sameeyeen.
Qoraalka Wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in Beesha Caalamka ay habaabinayaan sharciyada ay soo saaran Golaha Shacabka, isla markaana dowladda Soomaaliya ay dadaal ku bixisay in la hireliyo heshiiskii 17-kii Serptember.
Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo aad u dheeraa ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay awood u leeyihiin inay soo saaraan sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerarka khuseeya doorashooyinka heer federal, isla markaana hadallada kasoo yeeraya Beesha Caalamka ay dhiirigelinayaan Ururada Argagaxisada iyo Nabad-diidka.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowlada Soomaaliya.
Previous articleTirada dadka u dhintay Karoonaha ee Soomaaliya oo gaartay 656
Next articleXildhibano sheegay in weerar lagu yahay Saadaq Joon kuna baaqay in la difaaco